» टेलिकमको स्प्रिङ अफरः १४ जीबी डेटा ३ सय मै, अरु केके ?
टेलिकमको स्प्रिङ अफरः १४ जीबी डेटा ३ सय मै, अरु केके ?
२०७७ चैत्र ३०, सोमबार १९:२९
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आजदेखि लागु हुने नयाँ स्प्रिङ अफर सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमले नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी विभिन्न प्याकेज सहितको अफर ९० दिनसम्म उपलब्ध गराउने भएको हो ।
टेलकिमले यसअघि उपलब्ध विन्टर अफर अन्तर्गतका प्याकेजमा केही थप सुविधासहित स्प्रिङ अफर उपलब्ध गराएको हो ।